A na-emegharị gam akporo Auto na ndozi na ogwe igodo na ọkwa | Gam akporosis
Gam akporo Auto bụ ụdị nke gam akporo ezubere maka iji ụgbọ ala. Otu ụbọchị tupu Google I / O, ụmụ okorobịa na Google ka wepụtara otu mmelite dị mkpa nke na-enye anyị dị iche iche aesthetic novelties na anyị na-agwa gị n'okpuru ebe a na ndị ọrụ ga-enweta nke ọma.
Nke mbu na ikekwe kachasi mkpa bu ọhụrụ igodo mmanya, emi odude ke ukot interface. Iji ogwe ntuziaka a, ị nwere ike ịlele ntuziaka usoro nzọụkwụ, egwu na njikwa Podcast, jiri Enyemaka Google, na ịnweta ọkwa. Tupu, ụlọ mmanya ahụ gosipụtara ụdị ihe ọ bụla iji gosi na ọ na-arụ ọrụ ụfọdụ.
Banyere ọkwa, mgbe emelitere nke gam akporo Auto, ha anaghị ejedebe na ihuenyo ụlọ, ebe ọ bụ na e mepụtara ibe ebe ha niile na ebe anyị nwere ike ịmekọrịta, ugbu a a ụdị ngwa launcher, nke ga-enye anyị ohere ngwa nke na-ezitere anyị ọkwa ma ọsịsọ.
The aesthetics nke gam akporo Auto e nwekwara ọhụrụ, ịbụ ndị gbara ọchịchịrị isiokwu otu n'ime isi akwụkwọ akụkọ ya, dị ka ọ dị na interface niile. Na mgbakwunye, a gbanwere font ejiri maka ọ dị mfe ọgụgụ. Ejikwala mmelite a mee ihe maka ụdị ihe ntanye niile, ma ọ bụ akụkụ anọ ma ọ bụ karịa.
Google egosiputa mmeghari ohuru a otu ubochi I / O Google, obu ezie na dika o kwuputara ihe omuma a ọ gaghị abịa ruo oge ọkọchị na mbido. Enwere olile anya na ọ naghị eme dị ka sistemụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ dịka gam akporo Wear (tupu a kpọọ ya Wear OS), sistemụ arụmọrụ nke kwupụtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ gara aga, mana were otu afọ iji ruo ngwaọrụ ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-emegharị gam akporo Auto na ndozi na ogwe ihe nchọgharị na ọkwa